अझै भेटिएनन् पुर्व वडा अध्यक्ष उमानाथ शर्मा |
बागलुङ -बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर–४ कुडुँले निवासी ६६ वर्षिय उमानाथ शर्मा गत गत विहिबार देखी देखि वेपात्ता भएका छन । चैत्र २८ गते विहान सात वजे देखी परिवारको सम्र्पकमा नआएका कारण खोजि गरिदिन परिवारले आग्रह गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले शर्माको खोजीकार्य गरेपनी हाल सम्म फेला पार्न नसकेको बताएको छ ।
परिवारले शर्माका बारेमा दिएको जानकारीका आधारमा पाँच दिन सम्म खोजी कार्य गर्दा समेत फेला नपारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक कृष्णहरी शर्माले बताए । ७ दिन सम्म परिवारको सम्र्पकमा नआएका कारण सबैलाई खाजी कार्य गरिदिन आग्रह गरिएको परिवारका आफन्त भोलानाथ आचार्यले बताए । शर्माको खाजी गर्नका लागि स्थानीयहरु दिनभर ढोडेनी तथा कालीगण्डकी किनारमा जाने भएपनी शर्मा फेला पर्न सकेका छैनन् ।
शर्मा साविक बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर–१० का पूर्व वडा अध्यक्ष समेत हुन् । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल शर्र्मा विना कारण वेपत्ता भएको परिवारले जनाएको छ । शर्मालाई वेपत्ता हुँदाको दिन स्थानीयले घरबाट तल ढोडेनी भन्ने ठाउँमा देखेको प्रहरीले जनाएको छ । घर देखि तल ठूलो भीर र कालीगण्डकी नदि रहेको छ ।
बागलुङमा दुई शव फेला
विप्लव नेकपाको बन्दमा कहाँ के भयो?
आजको दिनम पनि छुवाछूत ? पानी छोएको निहुँमा दलितमाथि कुटपिट
खोटाङमा दाईको दुवै हात छिनालेर भाई फरार